Awunakho Ukuvula iiFolder zakho ze-imeyile. Ifayile ayisiyo Ifayile yeFolda ye-Offline.
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Ifayile ayisiyo Ifayile yeFolda ye-Offline
Ulwazi oluneenkcukacha malunga "neFayile ayisiyiyo Ifayile yeFolda engaxhunyiwe kwi-Intanethi"
Xa starNgoku Microsoft Outlook, ufumana umyalezo wemposiso olandelayo:
Ayikwazi ukuvula ii-imeyile zakho ezingagqibekanga. Ifayile ye-xxxx.ost ayisiyo fayile eneenkcukacha ngaphandle kweintanethi.
Zimbini izizathu eziza kubangela le mpazamo, ngolu hlobo lulandelayo:
The OST Ifayile yonakele okanye yonakele, kwaye ayinakuqondwa yiMicrosoft Outlook, ke i-Outlook izakuxela lempazamo.
The OST ifayile inxulunyaniswa nebhokisi yeposi kwiseva yoTshintshiselwano. Ukuba kukho naziphi na izizathu, iMicrosoft Outlook ayinakho ukufikelela kwibhokisi yemeyile yokutshintshiselana okanye ii-start ukungqamanisa ibhokisi yemeyile kunye neefolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kwi OST Imizekelo eqhelekileyo yile:
1. Kwi-Outlook, awuyicwangcisanga iakhawunti ye-imeyile yokufikelela kwibhokisi yemeyile yokuTshintshana ngokuchanekileyo.
2. Kwi-Outlook, ucima iakhawunti ye-imeyile yebhokisi yemeyile yokutshintshiselana.
3. Kwiseva yoTshintshiselwano, ibhokisi yemeyile yoTshintshiselwano, okanye iakhawunti yeimeyile yebhokisi yemeyile yoTshintshiselwano ikhubaziwe okanye icinyiwe.
4. Kukho iingxaki zonxibelelwano phakathi kwe-Outlook kunye neseva yoTshintshiselwano.
5. Awunayo iakhawunti yokutshintsha i-imeyile kwaphela. Kwaye iakhawunti yakho ye-imeyile isekwe kwi-POP3, IMAP, HTTP okanye iiseva zeposi ngaphandle kwe-Exchange server. Kodwa useta iakhawunti yakho ye-imeyile njengoTshintshiselwano olusekwe ngempazamo.
Ukusombulula le mpazamo kunye nokuthintela ukulahleka kwedatha, kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Ukuhlangula idatha engaxhunyiwe kwi-intanethi OST ifayile. Utshintsho OST Ifayile iqulethe idatha engaxhunyiwe kwi-intanethi, kubandakanywa imiyalezo yeposi kunye nazo zonke ezinye izinto, kwibhokisi yakho ye-Exchange, ebalulekileyo kuwe. Ukuhlangula ezi datha, kuya kufuneka ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuskena ifayile ye OST ifayile, ukubuyisa idatha ekuyo, kwaye ugcine kwifayile ye-Outlook PST ukuze ukwazi ukufikelela kuyo yonke imiyalezo kunye nezinto nge-Outlook ngokulula nangokufanelekileyo.
Gcina ifayile ye OST ifayile. Ngenxa yokhuseleko, kungcono uyigcine.
Ukuba ibhokisi yokuhambisa imeyile kunye neakhawunti ye-imeyile zisasebenza, kuya kufuneka uqiniseke ukuba useto lweakhawunti ye-imeyile kwi-Outlook ichanekile, kwaye i-Outlook inokunxibelelana neseva yakho yokuTshintshana ngokuchanekileyo. Emva koko unga start Jonga kwaye uthumele / ufumane ii-imeyile zakho kwibhokisi yemeyile yokutshintshiselana, eya kuthi yenza i-Outlook ukuba yenze entsha OST Ifayile ngokuzenzekelayo kwaye ungqamanisa idatha yayo nebhokisi yeposi yokuTshintshana, ukuba le ndlela ayisebenzi, nceda ulandele imiyalelo eku-5.2.
5.2. Ukuba ibhokisi yakho ye-Exchange okanye i-akhawunti ye-imeyile ayisekho, okanye awunayo iakhawunti ye-imeyile yotshintshiselwano kwaphela, okanye imiyalelo ku-5.1 ayisebenzi, iprofayile yakho yangoku ye-imeyile ayichanekanga, kuya kufuneka uyicime kwaye yenza entsha, ngolu hlobo lulandelayo:
5.2.1 Cofa Start, uze ucofe Iphaneli yokulawula.
5.2.2 Cofa Tshintshela kwiMbonakalo yesiqhelo ukuba usebenzisa iWindows XP okanye iinguqulelo eziphezulu.
5.2.3 Cofa kabini iposi.
5.2.4 Kwi Ukuseta Imeyile ibhokisi yencoko, nqakraza Bonisa iinkangeleko.
5.2.5 Khetha enye yeeprofayili ezingachanekanga kuluhlu kwaye ucofe Susa ukususa.
Phinda 5.2.6 de zide zonke iinkcukacha ezingachanekanga zisuswe.
5.2.7 Cofa Yongeza ukwenza iprofayili entsha kwaye ungeze iiakhawunti ze-imeyile ngokweendidi zazo.
I-5.2.8 Start Outlook, uyakufumana ingxaki inyamalala.